कसरी लिने १८ रुपैयाँमा ७० मिनेटसम्म फोन, म्यासेज र डेटा चलाउन पाइने टेलिकमको प्याकेज ?  Clickmandu
कसरी लिने १८ रुपैयाँमा ७० मिनेटसम्म फोन, म्यासेज र डेटा चलाउन पाइने टेलिकमको प्याकेज ?
क्लिकमान्डु २०७५ असोज १ गते १८:३८ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले संविधान दिवसको अबसर पारेर असोज १ देखि १५ गतेसम्म नयाँ योजना ल्याएको छ । यो योजना अनुसार १८ रुपैयाँको प्याक खरिद गर्नेले खरिद गरिएको समयदेखि ७० मिनेटसम्म कम्पनीको जीएसएम तथा सीडीएमए मोबाइलमार्फत कम्पनीको नेटवर्क भित्र जति पनि (अनलिमिटेड) कल गर्न, एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाउँछन् ।
कसरी लिने त यो सेवा ? वा भनौं कसरी किन्ने त यो प्याक ? यो बिषयमा हामीले नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा बैद्यसँग कुरा गरेर तपाइलाई जानकारी दिने प्रयास गरेका छौं ।
बैद्यले यो प्याक किन्ने वा यो सेवा लिने तरिका यसरी बताइन्ः
१. एप डाउनलोड गर्ने
यो तरिका अनुसार तपाइले टेलिकमका सेवा लिनको लागि नेपाल टेलिकमको ‘एनटी एप’ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ । तपाइले एनटी एप डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने आइओएस (आइफोन) को लागि एपसेन्टर र इन्ड्रोइडको लागि गुगल प्ले स्टोरमा गएर एनटी एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो एप डाउनलोड भएपछि तपाइको मोबाइल नम्बर हालेर एक पटकको लागि लगइन गर्नुपर्छ । यति गरेपछि सो एपमा नै कसरी यो प्याक खरिद गर्ने हो भन्ने जानकारी राखिएको हुन्छ । त्यहाँ भएको जानकारी अनुसार यो प्याक खरिद गर्न सक्नुहुनेछ ।
२. १४१५ डायल गर्ने
यो तरिका अनुसार तपाइले संविधान दिवस प्याक खरिद गर्नको लागि तपाइको मोबाइलको डायल प्याडमा गएर ‘स्टार १४१५ (यो १४१५ अंग्रेजी अंक डायल गर्नुहोला) ह्यास’ डायल गर्नुहोस् । यति गरेपछि तपाइको मोबाइलमा टेलिकमका विभिन्न (अहिले ९ वटा) अफर तपाइले देख्नुहुनेछ ।
यसमध्ये हामीले अहिले तपाइलाई जानकारी दिन खोजेको संविधान दिवस प्याकेज (कन्स्टिच्युसनडे प्याक) को हो । यो अफर ८औं नम्बरमा छ । त्यसको तल तपाइले केही टाइप गर्न मिल्ने संकेत आइरहेको हुन्छ । त्यसमा तपाइले ८ (अंग्रेजी अंक ८) डायल गर्नुहोला । यति गरिसकेपछि तपाइले यो प्याकेज प्राप्त गर्नुहुनेछ ।
अर्काे पनि तरिका छ । त्यो केहो भने तपाइले माथि भनिए झै ‘स्टार १४१५ स्टार ह्यास’ टाइप गरेर सोझै यो प्याक लिन सक्नुहुनेछ । स्टार अंक र ह्यास टाइप गर्दा बीचमा स्पेस लिइरहनु पर्दैन भन्ने त तपाइलाई थाहा छदैहोला ।
यो प्याकेज असोज १ (आज) देखि असोज १५ गतेसम्म खरिद गर्न पाइने हो । तपाइले जुनसुकै समयमा पनि यो प्याकेज खरिद गर्न पाउनु हुन्छ । तर, यो प्याकेज खरिद गरिसकेपछि ७० मिनेट अर्थात १ घण्टा १० मिनेटको लागि मात्रै यो प्याकेज पाइने हो । त्यो बेलासम्म तपाइले सेवा प्रयोग गर्नुभएन भने तपाइको पैसा सित्तैमा सकिन्छ । त्यसैले प्याक खरिद गरेपछि फोन गर्ने हो कि, एसएमएस गर्ने हो कि, डेटा चलाउने हो कि वा सकिन्छ र मिल्छ भने यी तीनवटै वा मिल्ने र सकिने जति सेवा प्रयोग गर्ने हो गर्न थालिहाल्नुपर्छ ।
एनटीसीको नयाँ अफरः १८ रुपैयाँमा ७० मिनेटसम्म फोन, म्यासेज वा डेटा जति चलाए पनि पाइने
धनकुटामा पनि टेलिकमको उच्च गुणस्तरको सुविधा, मूख्यमन्त्रीले गरे शुभारम्भ
एनसेलको ‘कल आयो पैसा पायो’ योजनाको विजेता घोषणा पाए स्मार्टफोन
देशका कुनाकाप्चामा सेवा पुर्याउने टेलिकमको अभियान, काभ्रेमा सञ्चारमन्त्रीले शुभारम्भ गरे
एनसेल फोरजीमा अब डबल डेटा, यसरी लिनुहोस् प्याकेज